मिस टिन निरुमा थापालाई पाँच प्रश्न | Agni News Agni News
२०७४ श्रावण २४, मंगलबार ०२:५८ PM
निरुमा थापा मिस टिन उर्लाबारीकी विजेता हुन् । मोरङको उर्लाबारी–७ की १८ वर्षीया यी सुन्दरी नेपाल दर्शन कजेल कक्षा १२ मा अध्ययरत छिन् । गायनमा विशेष रुची राख्ने उनी भविष्यमा मोडलिङसँगै गायनमा स्थापित हुने सोचाईमा छिन् । ५ फिट ४ इन्च अग्ली निरुमासँग गरिएका पाँच प्रश्न :
मिस टिन उर्लाबारीको ताज जित्दा कस्तो महशुस गर्नु भयो ?
– धेरै खुशी भएँ । हामी २३ जना प्रतिष्पर्धीहरु मिस टिन उर्लाबारीको ताज जित्न कडा मेहेनत गरेका थियौं । जसमा म त्यो ताज जित्न सफल बने । यो उपाधि जित्नु मेरो लागि ठूलै उपलब्धि हो भन्ने मैले ठानेकी छु ।
मिस टिन उर्लाबारी भएपछि जीवनमा के परिवर्तन आयो त ?
– हिजो म सामान्य युवती थिएँ, आज यो प्रतियोगिताले धेरै माझ चिनाएकोे छ । तर, म आफैं हिजो जस्ती थिएँ उस्तै छु भन्ने महशुस गर्छु । उपाधि जितेर होइन, काम गरेर ठूलो बन्न सकिन्छ । यति हो, उपाधिले पहिचान बनाउन सघाउँछ ।
सुन्दरी प्रतियोगिता जित्नेहरू मोडलिङ क्षेत्रतिर आउँछन्, तपाईंको के विचार छ ?
– म अहिले अध्ययन गर्दैछु । गायनमा मेरो सानैदेखि रुची छ । भबिष्यमा गायनसँगै मोडलिङमा स्थापित हुने सोचाई बनाएको छु ।
तपाईको जीवनको उद्देश्य चाँही के हो ?
– गायन । गायन क्षेत्रमा मलाई स्थापित हुने इच्छा छ । साथै समाजसेवाको क्षेत्रमा पनि केही गर्ने मन छ ।
–साथीहरुसँग घुमफिर गर्ने, टिभी हेर्ने, फेशबुकमा साथीहरुसँग कुराकानी गर्ने ।
तपाईंलाई आफू कतिको राम्री छु भन्ने लाग्छ ?
– सबै मान्छेको हेराई एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन । तसर्थ म धेरै राम्री छु भन्ने पनि लाग्दैन । म जस्तो छु, त्यसैमा खुशी छु ।
तस्बीरः सरोज श्रेष्ठ